कोरोनाले बिथोल्यो मानिसको निन्द्रा, यी टिप्स पढेपछि भन्नुहुनेछ – शुभरात्री ! « Lokpath
२०७६, २१ चैत्र शुक्रबार २१:२७
कोरोनाले बिथोल्यो मानिसको निन्द्रा, यी टिप्स पढेपछि भन्नुहुनेछ – शुभरात्री !
प्रकाशित मिति : २०७६, २१ चैत्र शुक्रबार २१:२७
काठमाडौं । आ – आफ्नै रफ्तारमा चलिरहेको सय टक्क रोकिएझैँ भएको छ ? सकारात्मक सोँच साँघुरिँदै गएको छ ? निराशा बढ्दै गएको छ ? मोनोटोनस महशुस हुन थालेको छ ? पहिलेजस्तो व्यवस्थित दैनिकी छैन ? चंगा जस्तै फूरुरु उड्ने मन अशान्त छ ? थुनिएझैँ लाग्छ ? मोबाईलमा पल पल आउने समाचारले मष्तिष्कमा डेरा जमाईरहन्छ ? अनि राति अबेरसम्म निन्द्रा आउँदैन ?
यदि यस्ता लक्षण तपाईमा भएर निन्द्रा नआएको हो भने नआत्तिनुहोस् । यो तपाईमा मात्रै देखिएको समास्या होईन । विश्वलाई डरैडरमा राखेको कोरोना भाइरस कोभिड नाईन्टिनका कारण तपाईको दैनिक अरुद्वार निर्देशित छ । त्यसैले तपाईलाई भित्रभित्रै बिथोलिएको महशुस भएको हो । यो विश्वका अर्बौ मानिसहरु यस्तै समस्याबाट गुज्रिएका छन् । तर होसीयार आफ्नो शरीरको यो अवस्थालाई यतिकै छोड्नुभयो भने देश लयमा फर्किँदा यो समय ठिकसँग चल्ने अवस्थामा आईपुग्दा समेत तपाईँ लयमा फर्किन सक्नुहुन्न । त्यसकारण आज लोकपथले केहि टिप्स जम्मा पारेको छ ।यसलाई आजबाट लागू गरेर हेर्नुहोस् त ?
तनाव सबैलाई छ, भनेर सोच्नुहोस् :
तपाईंलाई आफ्नो विषय मात्रै टाउको दुखाईको विषय लाग्छ है ? तिलजत्रो कुरा पहाडजत्रो लाग्छ है ? अनि समस्या समाधानपछि तपाई आफैँ फिस्स हाँस्दै ह्या मैले सानो समस्यालाई त्यतिबेला कति भयानक बनाएछु भनेर आफैँसँग प्रश्न गर्न मनलाग्छ है ? हो, तपाई मात्रै होईन हिजोआज हर मान्छेको दैनिकी व्यस्त छ, तनाव पनि उतिकै । जसले गर्दा मानिसहरुमा अनिन्द्राको समस्या देखा पर्दै गइरहेको छ । जो कोहीलाई भोलिको चिन्ता छ यहाँ । जसले गर्दा हामीलाई दैनिक रुपमा अल्छी, अनिन्द्रा र थकानले सताइरहेको हुन्छ । झनै त्यसमाथि अहिले भयावह कोरोनाको डर थपिएको छ । तर आजबाट तपाईले मनलाई शान्त बनाएर जवाफ दिनुहोस् प्रिय मन म मात्रै होईन सिंगो विश्व व्यस्त दैनिकीमा दगुरेको छ । सबैलाई पिरमर्का छ । मैले हरकुरामा सम्हालिनुपर्छ ।
यो बुझ्नुहोस् शरीरले तपाईंबाट माया खोज्छ :
दिनभरी चलायमान भएको शरीर रातमा आराम गरेर भोलिपल्ट फेरि सक्रिय हुनुपर्छ । यसको लागि तपाईं ढुक्कले निदाउँन निदाउन जरुरी छ । एक स्वस्थ मानिसलाई कम्तिमा ६ देखि ८ घण्टा निदाउनुपर्छ। शरीरलाई ताजा, फूर्तिलो, तन्दुरुस्त र स्वस्थ्य राख्न निन्द्रा अपरिहार्य छ । निन्द्राले हाम्रो शरीर र मस्तिष्कलाई विश्राम दिन्छ । तर तपाईं आफ्नो शरीरलाई माया नै गनुहुन्न । आफू हावी भएर मनलाग्दी बाटो दगुर्नुहुन्छ । अनि जब शरीरले तपाईलाई साथ दिँदैन तब भगवान् गुहार्नुहुन्छ । त्यसैले शरीरलाई माया गर्नुहोस् ।
अनिन्द्राको लक्षण के हुन् ?
कतिपय मानिसलाई निन्द्रा नलाग्ने समस्या हुन्छ। सुत्ने समयमा निन्द्रा नपर्नु, निन्द्रा परेपनि राति बेलाबेलामा बिउँझनु र फेरि सुत्न नसक्नु, बिहान अति चाँडै आँखा खुल्नु, मनमा अनेक तर्कना आउनु, आँखाका परेली जोड्नै मन नलाग्नु भोलिपल्ट अनिँदो देखिनु, फ्रेस हुन नसक्नु अनिन्द्राको लक्षण र नतिजा हुन्। हुन त उमेर बढ्दै जाँदा अनिन्द्राको समस्या देखिने डाक्टरहरु बताउँछन्। तर सावधान अनिन्द्रा भयानक समस्या हो, जो अनेक रोगको कारण बन्छ । अनिन्द्राको कारण मधुमेह, उच्च रक्तचापदेखि तौल बढ्नेसम्मको खतरा हुन्छ ।
– गहिरो निन्द्राका लागि शारीरिक गतिविधिलाई बढाउनुहोस् । घरको काम गर्ने, हिँड्ने, खेल्ने, व्यायाम गर्ने जस्ता कामहरु गर्नुहोस् । यो घरभित्रै पनि गर्न सकिन्छ ।
– बिहान चाँडै उठ्ने र मर्निङवाकमा निस्कने गर्नुहोस् । तर यो बेला योगा गर्नुहोस् या यसको समय बढाउनुहोस् ।
– गहिरो निन्द्रका लागि ओछ्यान आरामदायक हुनुपर्छ । मध्यम श्रेणीको मुलायम बिछ्यौनामा सुत्नुपर्छ ।
–धेरै मुलायम बिछ्यौनामा कम्मर एवं ढाँड दुख्ने समस्या हुनसक्छ । धेरै मुलायम र धेरै कडा बिछ्यौना मेरुदण्डका लागि पनि उपयोगी हुँदैन ।
– सुत्ने कोठामा टेलिभिजन, कम्प्युटर, मोबाइल आदि नराख्नुहोस् ।
प्राकृतिक निन्द्राको लागि तपाईले केहि टेक्निक फलो गर्नुपर्छ । जुन विभिन्न अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ ।
-बेडमा पुगेपछि मोबाईल आफूबाट पर राख्ने /नचलाउने
सामान्यतया बोलीचालीको भाषामा भन्ने गरिन्छ ‘एक दिनको निन्द्राले सात दिन पिरोल्छ ।’ यो भनाइ विल्कुलै सही हो । एक दिन राम्रो निन्द्रा परेन भने हरेक समस्याहरु सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । साधारणतया मानिसहरु कम्तिमा आठ घण्टा सुत्नुपर्ने चिकित्सकहरुको भनाइ छ ।
वृद्व (६५ वर्ष भन्दामाथि) यो उमेर समूहका मानिसहरुका लागि दैनिक ७÷८ घण्टाको निन्द्रा स्वस्थ मानिएको छ । तर यिनीहरुले ५ घण्टाभन्दा कम र ९ ९ घण्टाभन्दा बढि सुत्नु हुन्न ।
वाकरले भनेका छन्, पछिल्लो समयका मानिसहरु प्रविधीमा हिमचिम बढाएर आफ्नो निन्द्रा साटिरहेका छन् । त्यसैले अब आजबाट यी टिप्सहरु लागू गरेर मिठो निन्द्रा पाउनुहोस् ।